Yakanakisa Slim Simudza & Slide Sisitimu Mugadziri uye Fekitori | Medo
Zvishoma nezvishoma mumatope Window
Slimline Simudza uye Slide Door
Bi folding musuwo
Turnable inotsvedza gonhi
Kunze Roof Uye Shading System
Slim Simudza & Slide Sisitimu
WDCTSM140 / 190
Max Load Kugona 600kg
Slimline neCorner Kuvhura Inowanikwa
Patent Drainage uye Dhizaini Dhizaini
Ose ari maviri Manongedzo uye Mota Mhando Dziripo
MDTSM 140 - 300KG
Mbiri yemadziro ukobvu: 2.5mm
Saizi yehukuru: 140mm
Girazi ukobvu: 46mm
Max mutoro: 300kg
Kukura kwepakati: 32mm
MDTSM 190 - 600KG
Mbiri yemadziro ukobvu: 3.0mm
Saizi yehukuru: 190mm
Max mutoro: 600kg
Space inove yakatanhamara kana iine chirevo chakanakisa chekugara kwevanhu. MEDO inotenda kuti kuwanikwa kweakasarudzika aesthetics yekureruka kunoenderana neruzivo rwakanyanya uye basa rakanakisa. Chigadzirwa ndechekusangana nezvishuwo zvevanhu vakasiyana zvehupenyu hwemhando yepamusoro uye kutsvaga pamberi peaesthetics.
Slimline Simudza Uye Slide Door Sisitimu
Maitiro ekushandisa slimline simudza uye mutserendende musuwo wechivako irwo rudzi rwe tangle. Maitiro ekuona kuti yakasimba mhepo kumanikidza kuramba, inorema kutakura kutakura, mvura kuomesa, kudzivirira mweya ... dzese idzi inyaya idzo dzinogadziriswa neMEDO vagadziri.
lt chinetso chakanyanyisa kuita kuti masuo ekutsvedza akure muhukuru, mutete nemitsetse yakanaka, uye kugona mukuita!
3.0mm kukora kwemadziro, mitsara yakaenzana yehurefu, yakapetwa kaviri kupisa, rinorema basa riine max 50Okg mutoro unotakura: ese eaya anoratidza vagadziri kugona kwakakura pane chimiro chimiro dhizaini uye iko kwekupedzisira kutsvaga kwehardware mhinduro.
Dual thermal break, clamping track
Dual kupisa kupisa
Dual chafariz kuputsa chimiro dhizaini kuti uwane yakanyanya kudziya kuputira kuita. Simudza uye mutserendende system ine yakakosha yekuisa chisimbiso gaskets uye yakaderera kukwesana yekuisa chisimbiso tambo kuti uwane kuita kwakanyanya kwemhepo kuomesa, kuomesa kwemvura uye kupisa kwekushisa. Yakatsaurirwa bhalansi vhiri uye yekunamatira track kuti windows nemagedhi anyatsogadzikana.
Yakakosha dhizaini dhizaini, panoramic maonero
Dhizaini yakakosha dhizaini
3 dhiraini mhinduro ine yakakosha dhizaina magumo dhizaini uye yekunze dhirinage tangi dhizaini yekugutsa akasiyana zviitiko neakanakisa mvura kuomesa Yakasimbiswa slim inopindirana dhizaini yeyakakura saizi panoramic inotsvedza musuwo nemaonero asingagumi.
Yakakwira mutoro inotakura, 2-Track / Panel, 2-Lock / Panel
Mutoro wakakura unotakura
Dual Track / Panel
Dual Lock / Panel
Inorema basa repasi roller uye maviri mateki pa sash kusvika max mazana matanhatu emakona makuru epanoramic. Kaviri kukiya pane pani ye kuchengetedzwa kunoshamisa uye humbowo hwekuba.
Smart kure kudzora
Inotyaira mashandiro e smart imba. Heavy basa pasi chinotenderera hombe panoramic panels. Simudza uye inotsvedza system inopa yakanakisa kuiswa chisimbiso kwe masuo ekunze. Kugadziriswa pamwe nekiyi yekuwedzera kuchengetedzeka uye kuvanzika.
Dual thermal break break uye clamping track
Dual chafariz kuputsa chimiro dhizaini kuti uwane yakanyanya kupisa kupisa kuita. Simudza uye slide system ine yakakosha yekuisa chisimbiso gaskets uye yakaderera kukweshera kwekuisa mucherechedzo kuti uwane kuita kwakanyanya kwemhepo kuomarara, kuomesa kwemvura uye kupisa kupisa. Dedicated bhalansi vhiri uye clamping track yekuita kuti windows nemikova zvive zvakatsiga.
Yakakwirira yakaderera track, panoramic maonero
Yakakwirira yakaderera track
Yakakwira yakaderera track dhizaini yekunakisisa mvura kuomesa. Slim kupindirana kwe panoramic maonero.
Yega fan inovhura uye yepedyo, Yakakwira mutoro inotakura
Mumwe chete fan on / off
Imwe chete yekuvhura pani yekusangana nebasa rekuda kweakakosha mamiriro. Inorema basa repasi roller yekuvhura kukuru neisina muganho maonero
Simudza uye mutserendende system yekunze yekunze yekuisa chisimbiso. Cylinder kumisikidzwa kwekuwedzera kuchengetedzeka uye kuvanzika.
Yakagadziridzwa Inomanikidzwa Kupinda Kuramba
Kana musuwo wekusimudza uye wekutsvedza wavharwa uye mubato ukaendeswa munzvimbo yakavharwa, kwete chete nzira dzekuvharira dzinobatanidzwa, asi huremu hwakazara hwemhepo inoiswa pasi pafuremu. Vanovhundutsa havangodi chete kuti vagadzire yakakwana yekupwanya iyo yakawanda poindi yekukiya michina, asi zvakare fambisa huremu hwemhepo.
Uye zvakare, kunyangwe kana mhepo yacho ikasiiwa yakavhurika kuti ive nemhepo, haigone kungosundidzirwa kuvhurwa chero bedzi mubato usingakwanise kubviswa kubva kunze.
Kunatsiridza Mvura Kusimba | Zvirinani Kuomesa Kwemhepo | Yakawedzera Nguva Yakareba
Iyo yekusimudza uye yekutsvedza musuwo unoshandisa nzira inosimudza iyo pani isati yatsvedza kuti idzivise iyo commons nyaya dzekugara dzichitsvedza masuo uye inopa zvirinani zvirinani mune kusimba kwemvura uye kuomesa kwemhepo. Kutanga, inobvumira zvisimbiso kuti zviregedze uye kudzivirira chero kusangana nekukakavara panguva yekushanda; Chechipiri, makobvu anodhinda anokwanisa kuiswa sezvo iwo asingawedzere kune kuyedza kwekuvhura iyo pani.
Uyezve, hupenyu hwakawedzerwa sezvo zvisimbiso zvisina kuratidzwa kupfeka nekukuvara kubva mukukwesana.
Nyore & Ultra Smooth Kushanda
MEDO Simudza uye Slide Maitiro anotendera mushandisi kuvhura kunyangwe epakati-saizi mapaneru nekupfava kwemunwe.
Pamusoro pechikwata chakasimudzwa chakadzivirirwa kubva mukukuvadzwa kunokonzerwa neguruva nematombo mudiki munzira.
MEDO Simudza uye Slide Masuo anoshandisa premium yakakwira-yekuita roller mabhegi kusimudzira mushe kushanda.
Nekudaro, simudza uye mutserendende musuwo unokurudzirwa zvakanyanya kune makuru mapaneru ane huremu huremu.
Iine nyore kushandisa mubato uye patent nzira yekufambisa, kunyangwe vana nevakuru vanogona kusimudza nyore rinorema pani.
Kutendeuka kuri nyore hakungovhure chete musuwo asiwo kusimudza musuwo panguva imwe chete.
Iko hakuna yekuwedzera chigunwe-inoshandiswa kukiya michina inodiwa, uye haizokanganisike nekufamba kwenguva.
Pashure: Curtain Wall System
Zvadaro: Zvishoma nezvishoma mumatope Window
Slimline inotsvedza System
Bi Kupeta Sisitimu
Turnable inotsvedza System
Runhare: 0086 159 2097 0640 (Bella)
Runhare: 0033 6 5093 1674 (Alain)